Ndeipi yakanyanya kunaka yekutengesa hofisi ruvara zvirongwa? – RGB Color Picker
Black Painted Interior Doors Color Picker
Ginger Hair Color For Red Long Hairs Color Picker
Ginger Hair Color For Fair Skin Color Picker
Dark Hair Color Ideas For Latest Balayage Hair Color Color Picker
Ndeipi yakanyanya kunaka yekutengesa hofisi ruvara zvirongwa?
Iwo mavara muhofisi mako anogona kuita zvinopfuura kuita kuti apapure! Mamiriro ako ezvinhu shading anorongedza mufananidzo wako pamwe nekukanganisa zvakanyanya kubudirira kwevashandi, kukurudzira uye ne uye hukuru hwepfungwa. Funga nezve iyi mapatani kubatsira kuratidza chimiro chako chehofisi kwenguva yakareba kwazvo ichauya.
Ultra Violet: Ita chiziviso nePantone Rudzi rweGore-Ultra violet. Inofungidzirwa nezvemumvuri werudzi rwepepuru, yakanyanya, inoshamisa, uye inounza mafungiro echokwadi uye hutano mune chero kamuri. Zvisinei nekuti nzvimbo yako haina kubatwa kana kupenya, iyi mumvuri inoshanduka-shanduka kuti iende nehurongwa hwekuchinjisa uye inogona kushandiswa mune yakasarudzika yezvimedu zvinosimbisa.
Toni Dzakajairika: Nehurongwa hwe biophilic, maitiro ari kukura anojoinha zvikamu zvepasi rose munzvimbo yekucheka akaunganidzwa akaungana, hazvisi zvisingatarisirwi kuti akapfuma, masikirwo matani anowanikwa mukubatanidzwa kwenzvimbo dzehofisi. Kana iwe uchibatanidza yakasvibira mukati pamwe neyakajeka mish-mash, iwe unogona kugadzira mamiriro ekusunungura ayo anoita kuti vashandi vagare vachibatirana uye vanoshanda mukureba kwezuva. Dzimwe nzira tan uye yerudzi rwakasviba dzakabatana neinotonhorera bhuru inogona kuenda kure mukugadzira isingafadzi, yemazuva ano nharaunda.
Delicate Pastels: Vanhu vamwe nevamwe vehukama vari kutora zvine mwero nzira yehupenyu, sezvakaita shading maitiro! Basic, yakanyarara mavara, yakafanana nejecha pink uye pearl rima, shandira pamwe kuita yekucheka kumucheto, mamiriro akadzikama anofambisazve kumutsiridza nekusimudzira.
Kusviba Kudzoka: Vazhinji vakanzvenga kushandisa rima mune yavo yemukati chimiro, zvisinei, ese-erima makamuri ari pane rebound. Iyo shading inoonekwa sechaifanirwa kuve nechero chekuti inopindirana zvakanaka pamwe ne assortment yezvinhu, mienzaniso, uye zvigadzirwa. Kubva pasi kusvika padenga, rima rinogona kuita kuti chero nzvimbo yemabasa itaridzike yakatsiga, hunyanzvi uye hwakanyanya.
Kubva kumavara akanyanya kusvika kune shortsighted shades, maitiro egore razvino anogona kuita kuti kushamwaridzana kwako kunamate apo uchivandudza purofiti uye kusimudzira nyika dzepfungwa! Kune Commercial Office Environments, isu hatigone kungojoinha chikamu cheiyo nyowani nyowani mavara asi mukuwedzera iwo anokodzera mufananidzo wako. Kunyangwe iwe uchifanira kuita yekukasira pamusoro pevaparadziri kana kusanganisa nekuwedzera kwakapfuma nekutsunga kwedu kwemaficha uye nevhider divi, zvakakosha kuti utarise yako yerumwe rudzi rwehukama kuburikidza nemienzaniso, zvigadzirwa, uye kunyanya, kutetemera.
Ruvara runofurira mumwe nemumwe wedu. Vanosunungura (zvasara) manzwiro uye manzwiro mumunhu mumwe nemumwe. Hazvishamisi kuti masangano nevagadziri vari kushandisa zviwanikwa zvakakura zvemari kuti vaone mavara akakwana ezvinhu zvavo nezvitoro. Kuita izvi kunovimbisa vatengi kuramba vakareba mune izvo zvitoro uye, kunyanya zvakanyanya, tenga. Nenzira imwecheteyo, hofisi yakakodzera ichadzikisa pfungwa uye dzakanyatso natswa hofisi pendi mavara zvinogona kubatsira “kugamuchira, kukurudzira uye kukurudzira” pasi. Izvi, nekudaro, zvinogona kubatsira kuwedzera kwehunyanzvi uye kusimudza zvibvumirano.
Tsvagurudzo yakawanda yakatungamirwa pane zvinokonzeresa chaiwo mahofisi ekupenda mavara pamaitiro emahofisi mabasa sekugadzira, kugadzirisa, kutora runhare, kurekodha uye zvichingodaro. Kuongorora kwakafambiswawo kuti vaone mhedzisiro yekuvhara hofisi pfungwa mukubudirira kwevashandi, kugona, kuita uye kuzadzisa. Chinangwa cheimwe yeimwe bvunzo idzi ndeyokuona yakanyanya kunaka hofisi pendi mavara uye zvirongwa zvinogona kuvandudza hunyanzvi kubudirira uye kuuraya kunyanya mukati memahofisi mashoma nzvimbo. Kuongorora kwega kwega kwakaratidza kubatana pakati pehasha hwevashandi uye iyo yakatorwa muhofisi shading pfungwa.
Heano mashoma matipi kubva kune vanogadzira vatenzi uye shading Therapists kutora iyo yakakodzera hofisi pendi mavara.
Funga nezvebhizinesi-Neutral mavara marongero akakodzera kwazvo kumasangano echokwadi. Izvo zviri kutaurwa, vagari vemakamuri ebasa vachasarudzawo nzvimbo yebasa pendi kunoenderana nehunhu hwavo. Muchiitiko icho iwe chaunoshuvira kupfuudza kunzwa kwehutachiona kune iyo stylistic mamisirwo, tora inodziya uye ine moyo mavara kunge yero, orenji uye zvichingodaro uchifunga kuti ivo havasi kukunda zvakanyanya. Feng shui shading nyanzvi dzeiyo yakawanda chikamu chinopa kupepuka mamvuri eji kune nzvimbo dzebasa sezvo izvi zvinobatsira mukusangana uye ruzivo zvine chekuita nenyaya. Nezvekunyaradza zvimiro, nyanzvi dzinokurudzira shades kunge bhuruu-girini uye zvichingodaro. Kune nzvimbo dzebasa dzinoshandiswa nevanoronga, vanyori uye zvichingodaro, munhu anogona kutora mumvuri senge yero, orenji uye tsvuku. Kune mazvikokota, kushandiswa kweanodzikisira tani, tani uye zvimedu zvinobatsira kudzingira iyo psyche uyezve zvinobatsira mukugadziriswa. Nzvimbo dzinotonhorera seblue uye girini dzinofungidzirwa kumabasa anogumbura sevaya vezano repamutemo, muchengeti wemabhuku uye zvichingodaro sezvo rubatsiro urwu ruchisimudzira kusada uye kunyarara.
Funga nezve kuwanika kwemakamuri Kune nzvimbo diki dzehofisi, munhu anogona kutora mavara epahofisi sey chena, beige uye zvichingodaro kunyanya pamatenga sezvo izvi zvinogona kubatsira kuita fungidziro yekamuri hombe. Kune rimwe divi, rima rakasviba rakakwanira kumakamuri mahofisi mahombe sezvo izvi zvichigona kuita kuti mukamuri riwedzere kuderedzwa uye rakagadzikana.
Tarisa pane kudzikisa kunyudzwa Ruvara varapi saAngela Wright nekuwedzera kunetseka pamusoro pekunyudzwa kweiyo shading kupesana nekungochinjika pachako. Izvi zvinoreva kuti simba remumvuri ndicho chinhu chinoita kuti chikamu chikuru chinyengere mushandi kuuraya uye mufambiro kwete kuti iyo tint pachayo. Pamwe nemitsetse iyi, kudzikama kwakasimba uye kwakanaka kuchasimbisa mukati merimwe rakareruka kupurukira nokunyudzwa kwakadzika kuchadzikama.
Taura kushambadzira uku
Parizvino ngatidzidzei zvinoshamisa hofisi yekupusha pfungwa sekurudziro yaAlfred Wright uye nemabatiro atinoita isu:
Bhuruu inosimbisa iyo pfungwa-Angela Wright inokurudzira kushandisa bhuruu kunzvimbo dzebasa dzinosanganisirwa nevanochengetera mabhuku kana nyanzvi dzakasiyana dzinoda kuita rakawanda repfungwa basa. Angela mune chero mamiriro ezvinhu, zvakafanana anoratidza kushandisa bhuruu nemasasa eorenji kubatsira kururamisa pfungwa basa nekuwedzera kubata kwekunzwa kune chimiro.
Yero inosimbisa iyo Emotions- Iyi shading inokodzera inogadzira iyo hofisi yehofisi yepende mavara sezvo inoratidzira hana semweya. Iyo yakanakira mafashoni uye akasiyana masitunhu uko hunhu hunodiwa hunodiwa.
Girini ndeyokuenzanisa-Shandisa yakasvibira muhofisi mako ichidzikisa mifungo kunyanya iko mari ichachinja maoko nguva nenguva. Green inounza kuenzana, yakanyarara uye nyaradzo.
Tsvuku inokanganisa Muviri-Tsvuku inobatsira kuratidza kunaka kwemuviri uye kusimudzira. Iyo yakanaka kune nzvimbo dze rec, nzvimbo dzebasa apo vashandi venguva pfupi uye vanogadzira vanoshanda kana kusangana nevatengi uye nzvimbo dzakasiyana apo mumwe angangoda nharaunda kana yakasununguka nharaunda.
Yakakosha inotarisa kuyeuka kana uchinhonga yako muhofisi pendi mavara
Iko hakuna off-base hofisi pendi rangi Iyi ndiyo nzira yaunoshandisa nayo.
Sarudza kuti ndeipi chikamu iwe chaunoda mavara kuti akanganisa: Pfungwa / muviri / chiyero / manzwiro.
Sarudza imwe mumvuri uye wozosarudza kuti yakasarudzika kana yakaninipisa yakadzika sei
Makara haapo mukuvanda Vanoshanda zvakanyanya kana vakapeteredzwa nemhando dzakasiyana.
Aya maviri akati wandei epamusoro hofisi pendi mavara uye hofisi shading pfungwa uchishandisa iyo iwe yaunogona kutsigira mweya wevashandi uye kunatsiridza zvibvumirano zvako.
Chic Hair Coloring Color Picker
Luminous Golden Beachy Locks Color Picker
Blonde Hair Colors Color Picker
Ideas For Red Ombre Hair Color Picker
Copyright © 2020 RGB Color Picker Theme by principlesofafreesociety.com